अदालतले निर्वाचन आयोगलाई भन्यो, ‘माधव नेपालको पार्टी किन दर्ता गरेको ? माधव कुमार नेपालको जवाफ एस्तो – GALAXY
अदालतले निर्वाचन आयोगलाई भन्यो, ‘माधव नेपालको पार्टी किन दर्ता गरेको ? माधव कुमार नेपालको जवाफ एस्तो
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी किन दर्ता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग जवाफ माग गरेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो जवाफ माग गरेको हो ।
अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेका संघीय संसदका १४ सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई आधार मानेर नयाँ दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गर्दै छुट्टै रिट दिएका थिए ।
उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले विपक्षी निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि ३ दिनपछि नै मुद्दाको सुनुवाई राखिएको एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिए ।ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
एमालेले १४ सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
पार्टीले २५ साउनमै सांसदहरुलाई दलबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संसदलाई भदौ १ मा जानकारी गराएको भन्दै रिटमा सभामुखले कानुन बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई, अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि भदौ २८ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको बहसमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिए ।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेपछि निर्णय दिँदै कारबाही गर्न नपर्ने जानकारी गराएका थिए ।